Sidee loo qaabeeyaa Android hadii dhibaato xaga aragga ahi kaa haysato | Androidsis
Taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Android' waxaa isticmaala nooc kasta oo dad ah. Sidaa darteed, waa muhiim in loo habeeyo isticmaalkooda sida ku cad qofka isticmaalaya. Marka haddii uu adeegsado qof da 'weyn, hagaajin taxane ah ayaa lagama maarmaan ah, taas oo u oggolaanaysa adeegsi wanaagsan dadkaas. Sidoo kale waa run haddii qofka taleefanka isticmaali doona uu leeyahay dhibaato xagga aragtida ah.
Dad badan ayaa dhibaato nooc ka mid ah aragtidooda ku qaba. Laakiin, waa inay awoodaan inay adeegsadaan taleefannada casriga ah marwalba, si caadi ah. Sidaa darteed, marka laga hadlayo Android, waxaa jira taxane taxane ah oo aan qaadi karno. Sidan oo kale, isticmaalka taleefanka ayaa u fudud qofkan.
1 Cabbirka farta
2 Qoraalka farqiga sare leh
3 Weynee qoraalka
Mid ka mid ah dhinacyada ugu horreeya ee aan qaabeyn karno, taas oo shaki la’aan muhiim u ah dadkan, waa cabirka font. Telefoonka gacanta ee loo yaqaan 'Android' waxaan fursad u leenahay hagaaji cabirka farta, sidaan horayba kuu tusnay. Sidan oo kale, waxaan ka dhigi karnaa cabirka xarfaha mid aad u ballaaran. Maxaa qofkan u oggolaanaya inuu wax walba oo shaashadda ka akhriyo si aad u raaxo badan.
Caadi ahaan, taleefanka gacanta ee loo yaqaan 'Android phone' wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo xaraf ah oo laga kala xusho. Si adeegsade kasta u go'aansado midka ugu raaxada badan iyaga marka ay xaaladdu tahay, si looga faa'iideysto midba midka kale. Tan waxaa lagu sameeyaa goobaha taleefanka, qeybta shaashadda, waxaa ku yaal qaybta cabbirka font. Waxay yihiin tallaabooyin aad u fudud oo arrintan la xiriira.
Qoraalka farqiga sare leh
EShaqadani waxay fududeyneysaa qoraalka in la akhriyo, iyadoon beddelin cabirkiisa. Sidaa darteed, haddii warqadda dhajiska aysan ku habboonayn xaalad kasta, sida ay uga dhacdo bogagga internetka qaarkood ama codsiyada, shaqadan tan waa la beddelay. Marka qoraalka wuu sahlanaan doonaa in la akhriyo, maxaa yeelay aragtida qoraalka ayaa korodhay. Waxay faa'iido u yeelan kartaa isticmaaleyaal badan oo Android ah. Sidoo kale, waa muuqaal taleefanka ku soo dhaca.
Si loo isticmaalo qoraalka noocan ah, waa inaan galno dejimaha taleefannada casriga ah ee Android. Marka xigta, waa inaad gashaa qaybta marin u helka. Dhexdeeda, ka mid ah xulashooyinka lagu soo bandhigay shaashadda, waxaa jira a qaybta loo yaqaan qoraalka farqiga sare. Kaliya waa inaan dhaqaajinno shaqadan.
Sidan oo kale, qoraalka waa la iftiimin doonaa markaan adeegsaneyno degel. Taas oo u oggolaan doonta dadka indhahoodu daalan yihiin mar uun, ama ay ku adag tahay inay arkaan waraaqaha, waa wax aad u fudud in la akhriyo qoraalka shaashadda taleefannadooda Android.
Muuqaal laga heli karo taleefannada gacanta ee badan ee Android. Waad ku mahadsan tahay, waa suurtagal in la weyneeyo qoraalka shaashadda. Waxay noo ogolaaneysaa inaan weyno qoraalka adoo dhowr jeer taabanaya shaashadda qaab aad u fudud. Waxa ay ku guuleysato ayaa ah in qoraalka uu sii weynaado, oo uu dhow yahay, taas oo dad badani u oggolaanayaan in si raaxo leh loo akhriyo.
Intaas waxaa sii dheer, markii qoraalka la balaadhiyo, waxaan ka dhigi karnaa inuu sifiican ugu akhristo shaashadda, waana ku dhex mari karnaa isbadbadal. Waa ikhtiyaar fudud, oo aan awoodno ku rakib gudaha liiska marin-u-helka ee goobaha Android. In kasta oo telefoonnada oo dhami aysan yeelan karin muuqaalkan.
Haddii aad haysato nooc cusub oo Android ah, markaa waxay u egtahay inaad awoodi doontid inaad isticmaasho. Laakiin waxay kuxirantahay nooc kasta iyo lakab kasta oo qaabeynta ah, inaad haysato ama aadan helin marinka aaladda. Hubi haddii aad marin uga heli karto taleefankaaga, haddii aad aragto inay faa'iido leedahay in la isticmaalo.
Kiiboodhka shaashadda ee taleefanka ayaa muhiim u ah isticmaalka wanaagsan ee taleefanka. Tan iyo markii la isticmaalayo aaladda, dir farriimaha ama isticmaal codsiyada farriimaha, waxaan u adeegsanaynaa kumbuyuutarka Sidaa darteed, waa muhiim inaad adiguba font-ka kumbuyuutarka ayaa ka weyn hal cabbir, oo u oggolaanaya isticmaalka ka sii wanaagsan. Inkasta oo tani ay tahay wax aan awoodno.
Haddii aad ku isticmaasho Gboard-ka Android, waxaad fursad u haysataa inaad qaabeeysid noocyada noocan ah, taasoo suurta galineysa in la arko wax kasta oo ka dhaca kumbuyuutarka si aad u wanaagsan. Sidaa darteed, waxaa lagugula talinayaa, si aad ugu raaxaysato isticmaalka qalabka. Sidoo kale, haddii doorashadani aysan ku qancin, teebabka kale marwalba waxaa lagu rakibi karaa taleefanka. Maaddaama uu jiro kumbuyuutar leh badhanno waaweyn, taas oo sahlaysa in la arko.
Waxaa loo yaqaan 'Key Button Keyboard', oo u taagan inuu ka weynaado, badhamno waa weyn iyo xarfo waaweyn. Waxay noqon kartaa in isticmaaleyaal badan oo Android ah ay u fududeyn doonto aragtida waqti kasta. Waxaa si bilaash ah loogala soo bixi karaa Dukaanka Play:
Badhanka Badhanka Keyboard
Developer: Shirkadda Chicago Logic Inc.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo dajiyo taleefanka Android ee araga naafada ka ah
Barnaamijyada been abuurka ah ee Google Play waxay balan qaadayaan inay cusbooneysiinayaan taleefankaaga Android